Dhaqan, Af, iyo Taariikhda Dunidda | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Dhaqan, Af, iyo Taariikhda Dunidda
Ninkii uu dilkiisa sababay isku dhicii Spain iyo Mexico
José Gallostra y Coello, oo u dhashay dalka Portugal, wuxuu ahaa nin aad u qiimo badnaa marka le eego doorkiisii shaqo. Waxaa uu bixin jiray dal ku galka ay dadka reer Mexico ugu safri karaan Spain, xilli uusan markaas jirin xidhiidh ka dhaxeeyay labada waddan. Noloshiisa dhinaca bulshada waxay ahayd mid uu dadka oo idil kusoo jiidan jiray, wuxuuna ka qeyb gali jiray shirar badan oo ay yeelanayeen ganacsato, saraakiil dowladeed iyo diblomaasiyiin. Laakiin waxa uu islamarkaas aruurin jiray xog qarsoodi ah oo uu u diri jiray waddankiisa, taasina waxay siyaasiyiinta Mexico cadaadis ku saareysay inay dib u billaabaan xidhiidhada …
Sanadkii Ugu Nolosha Xumaa ee Soo Maray Taariikhda Adduunka
Haddii ay kula tahay in waqtigan lagu jiro xilliyo adag, bal dhankan ka fiiri arrimaha: xaaladdu sidan aad bay uga xumaan lahayd haddii aan ku jirno sanadkii AD536. Sida laga soo xigtay taariikh yahanka jaamacadda Harvard, ee lagu magacaabo Michael McCormick, “wuxuu waqtigaas ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa, hadduusanba ahayn sanadkii ugu xumaa ee dunida soo mara”, ee lagu noolaado meelo ka mid ah caalamka. Ceeryaamo aan la garaneynin sababta ay ku timid ayaa mugdi u baddashay Yurub, Bariga Dhexe iyo qeybo kale oo ka mid ah qaaradda Aasiya – mugdi maalin iyo habeen ah – ayaa …
Ismaaciil Ibraahim Hassan, October 12, 2020
Maanta oo kale, Sanadka walba waxaa dalka laga xusaa Maalinta Calanka, waa maalin ka tarjumeysa Qarannimo, Midnimo iyo gumeysi naceyb, 66 sano ayaa ka soo wareegatay markii la sameeyay calanka Soomaaliyeed, calankeeda waxaa uu leeyahay Sooyaal qiimo badan oo dal iyo dibadba lagu faani karo. Taariikhda Calanka Soomaaliya kama bilaabato xilligii ay Soomaaliya ku jirtay maxmiyadda lixdankii ka hor, ee waxaa jiray isku dayyo badan oo ay sameeyeen SYL xitaa ka hor inta aan Soomaaliya loo dhiibin Talyaaniga. Sida uu ii sheegay halgamaaga Soomaaliyeed Cali Xasan Maslax Berdura oo ka tirsanaa 13-kii ee aasaastay SYL, habeenkii la dhisayey SYl waxaa …
Yuusuf Garaad, September 27, 2020
Eraybixin waxaa ula jeedaa marka fikir, tab ama walax af ama dad aan Soomaali ahayni ay sidaan la isku dayo in loo helo af Soomaali. Eraybixin waxay noqon kartaa eray af Soomaaliga ku jira oo u dhigma midka ajnebiga ah ee lala kulmay. Waxay noqon kartaa eray Soomaaliga ku jiray oo aan awal macnahan loo adeegsan jirin, hadda ka dibse loo asteeyay. Waxay noqon kartaa eray la curiyay sida laba eray oo la isku daray si ay macna hor leh u sameeyaan. Waxayna noqon kartaa in la isla gartay in erayga laga soo ergado af qalaad. Eraybixin oo dhami waxay …
Afrikaan.so, September 26, 2020
Cumar Al-mukhtaar wuxuu dhashay 1858, wuxuuna ka dhashay qoys ka mid ah dadka ku nool magaalada Zanzur oo u dhow Tobruk, oo ka tirsan gobolka Ottoman Cyrenaica, oo ka tirsan Senussi (oo loo arkaayey inay yihiin Ashrafs-ka Liibiya) oo ah reer Carbeed sida Amiirka ama boqorka Idris es Senussi, aakhirkiina noqday caaqilka ama hogaamiyaha qabiilka. Markii uu yaraa Cumar aabihiis ayaa geeriyooday, yaraantiisiina wuxuu ku qaatay saboolnimo, yaraantiisina wuxuuna barashada qur’aanka uu u aaday tuulo aan ka fogeyn Zawaayet,. Waxaa soo korsaday nin Shiikh weyn ahaa, wuxuuna saaxiibo la ahaa wiilka uu adeerka u yahay Xusseen Ghariani, Sharif al Geriani. …
Noolaha Aadamuhu intii uu adduunka guudkiisa saarnaa, waxa uu ku hawlanaa oo ku jirey isbeddel xag kasta ku wajahan. Ha noqdaan isbeddeladaasi kuwo diineed, dheef la raadiyo, siyaasad, korriin caqli iyo jidh, maamul, bulsheyn, deegaamayn, aqoon yeelasho, unkidda ilbaxnimooyin iwm. Badanka fal kasta iyo tallaabo kasta oo hore loo qaadana, waxa shardi ama tiir u ahayd dan. Dantaasi marwalba waxa ay u adeegaysaa cidda falka ama tallaabada qaadaysa. Taas oo jirta, ayaa waxa ay dantaasi horseeddaa isriix-riix bulsheed ama qofeed. Waxaana ka dasha oo ka dhambalma, kana dheehma aragtiyo iyo tabab ku cusub waayahaas. Kuwaas oo si guud ummadaha kale …
Dhaqanka iyo hiddaha oo lammaan iyo akhlaaqda oo ku ladhan marna diin, marna dhaqan-hiddeedka ayaa ka mid ah mawdduucyada tiro beelay ee ummaduhu ay doodo adag geliyaan. Doodaha falsafadeed iyo fikir diimeedyaduna ay xoogga saaraan in halbeeg cayiman oo Aadame iyo Bulsho yar iyo tu weynba ay ku halbeegaan loo helo. Tiiyoo aanay bulsho goob iyo xilli cayiman nooli, aanay la duruuf iyo la xilli ahayn bulsho kale oo ka horraysay, ama se ka dambeysay. Saddexdan weedhood ee kala ah: Dhaqan, Hidde iyo Akhlaaq ayaan ugu horrayn qeexi doonnaa waxa ay yihiin. Ka dibna waxa aynnu u gudbi doonnaa inaan …
Qoritaanka Af Soomaaligu waa uu ka duwan yahay dhihitaanka afka, ama waxa aynnu odhan karnaa hadalka caadiga ah iyo dhigaalku waa ay kala geddisan yihiin. Waana muhiim in bulshadu iska toosiso afka Soomaaliga dhigaalkiisa saxda ah. Maadaama aanay jirin hadda dawlad u taagan ilaalinta afka Soomaaliga, bulshadiina aanay dawladd arrinkaas u heellan sugi karin, oo afka hadalkiisa iyo dhigaalkiisuba ay nolol-maalmeed ka mid yihiin, waxa lama huraan noqotay in qof walba inta karaankiisa ah uu bulshada u soo gudbiyo wixii uu ku dhaamo ee mawdduucaas ku saabsan. Qormadan aan ugu magac daray Hab-Qorista Qumman ee Af Soomaaligu, ma noqon doonto …